1xbet codsi moobiil ah oo loogu talagalay macruufka iyo soo dejinta android
Qalabka moobiilka 1XBet
Shirkadda qamaarka ee 1xbet waxay siisaa isticmaaleyaasheeda kaliya maahan shayga goobta rasmiga ah, laakiin sidoo kale codsiyada la rakibi karo:
Telefoonada gacanta ee ku saleysan Android
Intaa waxaa dheer, dhammaan xiriiriyeyaasha lagu soo dejinayo barnaamijyada waxay ku yaalliin bogga rasmiga ah ee xafiiska buug-hayaha, halkaas oo lagala soo bixi karo oo lagu rakibi karo iyada oo aan wax dhibaato ah.
Faa'iidooyinka barnaamijka Dhibaatooyinka barnaamijka
Meel aan kala go 'lahayn oo loo galo goobta Sharad lagu ciyaaro isboorti aan caan aheyn ayaa kudhowaad lawaayay.
Ku xirid kumbuyuutarka
Eeg qulqulka khadka tooska ah
Dhibaatooyinka ugu sarreeya
Tababyada iyo isweydaarsiyada daqiiqad qudha ayaa lagu raraa
Sida loo rakibo barnaamijka android
1xbet u soo dejiso iPhone
Qalabkee ayaa taageera barnaamijka
Sida loogu sharaddo barnaamijka moobiilka
Ciyaaryahanno badan ayaa ka badalaya nooca PC-ga una wareejinaya nooca mobilada maxaa yeelay aad ayey uga raaxeysan yihiin.
Waxaad ka soo dejisan kartaa barnaamijka bilaashka ah oo aamin ah bogga rasmiga ah. Si aad u rakibto barnaamijka 1xbet ee Android, raac talaabooyinka fudud ee hoose:
Ka soo qaad qalabkaaga gacanta, tag goobta rasmiga ah ee xafiiska buug-hayaha.
Dhagsii xiriiriyaha kugu hagi doona inaad soo dejiso barnaamijka Android
Faylka APK bilaabi raritaan, sug 30 ilbiriqsiyo.
Guji guji oo xaqiiji soo dejinta faylka.
Marka ay astaantu ka muuqato shaashadda weyn ee taleefankaaga, barnaamijka waa u diyaar in la isticmaalo.
Fadlan ogow in aysan jirin barnaamijyo loogu talagalay Android adeegyada rasmiga ah ee Google play. Barnaamijka waxaa lagala soo bixi karaa oo kaliya barta rasmiga ah ee 1xbet. ha ka soo dagsanin arjiga tooska ah marinka internetka, waxaad ku qaadi kartaa virus taleefankaaga, ku rakib barnaamijyada kaliya ilaha lagu kalsoon yahay.
Si aad u soo dejiso barnaamijka iPhone-ka ayaa aad uga fudud kan android-ka, maxaa yeelay waxaa lagala soo bixi karaa App Store-ka rasmiga ah. Si tan loo sameeyo, si fudud u riix astaanta muraayada weyneynta ee ku jirta meeniska raadinta ka dibna ku qor su'aasha 1xbet. App-ka koowaad ee soo bixi doona waa midka aan u baahan nahay. Guji batoonka soo deji oo sug barnaamijka soo dejinta oo astaamaha 1xbet ayaa ka soo muuqan doona “Guri” shaashadda.
Barnaamijka on your iPhone lagu rakibi karo goobta rasmiga ah, tan awgeed waxaad u baahan tahay inaad ku dhex marto taleefanka gacanta goobta 1xbet oo aad kala soo baxdo barnaamijka adoo gujinaya xiriirka.
Ka sokow codsiyada ku saabsan taleefannada gacanta, sidoo kale waxaad ku rakibi kartaa barnaamijka kombiyuutarka ama laptop-ka, codsigu wuxuu taageeraa nooca: Windows 7.8, 8.1, 10 waxayna taageertaa IOS. Adeegsiga barnaamijka, waxaad heli kartaa marin buuxa 24 saacadood maalintii khadadka iyo ciyaaraha.
Si aad u soo dejiso barnaamijka looma baahna in la rakibo cusbooneysiinta barnaamijka ugu dambeeyay, si loo rakibo meel bilaash ah oo kugu filan, wax badanna uma baahna:
Wixii android ah – 18 MB
Wixii iPhone ah – 21 MB
Mararka qaarkood barnaamijyadu ma shaqeyn karaan, tani waxay dhacdaa marar dhif ah, laakiin wali, dalabka waxaa laga yaabaa inaan la heli karin sababaha soo socda awgood:
Codsiga, sida goobta rasmiga ah , waxay ubaahantahay cusbooneysiin qorsheysan, ku saabsan taas 1xbet ay ogeysiis ugu sameyneyso ciyaartoyda qaab fariin ah. Haddii aadan arkin digniinta, iskuday inaad gasho golahaaga shaqsiyeed adoo adeegsanaya nooca kumbuyuutarka ee goobta, hadaad ku guuleysatay inaad gasho, markaa arjiga waxaa cusbooneysiinaya kuwa soo-saareyaasha ah.
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa maciin bida khamaaris aan caddaalad ahayn, fargeetooyin, taas oo buug-yarahu baray xisaabinta iyo xayiraadda xisaabaadka. Waxaa laga yaabaa inay taasi tahay sababta aadan u geli karin golahaaga shaqsiyeed. Sababta loo xannibayo koontada sidoo kale waxay noqon kartaa khaladaadka dhexdhexaadiyaha 1xbet, markaa waa inaad la xiriirtaa adeegga taageerada xafiiska buug-hayaha.
Haddii sababaha kor lagu soo sheegay midkoodna aanu ku habboonayn xaaladdaada, isla markiiba la xiriir taageerada macaamiisha una sharax dhibaatadaada si faahfaahsan warqad ay tahay inaad ku soo lifaaqdo shaashadda si aad u caddeyso dambi la'aantaada, jawaabtu waa inay gudaha soo gasho 3 maalmaha codsiga. Buug-sameeyaha ayaa laga yaabaa inuu codsado macluumaadka baasaboorka, sida ku xusan xeerarka shirkadda.
Si loo rakibo barnaamijka, waxaad u baahan tahay inaad raacdo tilmaam fudud:
Booqo goobta rasmiga ah ee buug-gacmeedka 1xbet
On menu menu sare, dhagsii astaanta android
Xiga, bilow soo dejinta faylka apk (ogow inaadan soo dajineynin codsi, laakiin kaliya keydkeeda)
Xiga, sug faylka soo dejista
Si aad u rakibto arjiga waxaad u baahan tahay inaad gujiso oo aad xaqiijiso rakibidda
Sug inta barnaamijka la rakibayo isla markaana astaanta 1xbet ay ka muuqato shaashadda taleefankaaga gacanta
Si aad sharad uga sameyso barnaamijka mobilada, waa inaad isdiiwaangalisaa oo aad dhigataa ugu yaraan 50 Rashiil. Si aad u sameyso sharad guul leh:
Marka hore akhri khadka
Go'aanso isboortiga aad rabto inaad ku sharraxdo.
Dooro ciyaar, waxaa fiican inaad xulato kooxo aad taqaan.
Markaa waxaad u baahan tahay inaad doorato natiijada, waxay kala yihiin sidan soo socota: P1 – guushii kooxda koowaad, P2 – guushii kooxda labaad, X – sawirid.
In la barto isuduwayaasha
Markaad la qabsato, tijaabi natiijooyinka, wadarta iyo naafada.
Barnaamijka waxaad sidoo kale marin u leedahay dhammaan noocyada sharadka, natiijooyinka iyo khilaafaadka, sida goobta rasmiga ah.
Adiga ayaa sameysan kara barnaamijka, oo dhaqaaji ogeysiiska kaliya cayaarahaas aad xiiseyneyso, waxaad ku geli kartaa kuna soo saari kartaa lacagaha adoo adeegsanaya moobilkaaga gacanta, waxaad samayn kartaa app on shaashadda macruufka ah, iyo hadday tahay wax degdeg ah, barnaamijka ayaa si otomaatig ah kuu soo ogeysiinaya. Ciyaartoyda leh taleefan leh faraha ama aqoonsiga wajiga, waad dejin kartaa gelitaanka barnaamijka adigoon isticmaalin isticmaale isticmaale iyo isgarad.